Ukuqala ibandla lakho - Sikunye
Ukuqala ibandla lakhoIvo Kittel2021-03-08T15:53:10+02:00
Ukuqala ibandla lakho
Sikholwa wukuthi wonke umuntu unendima ayibambayo ekubhaleni ukulandisa ngekusasa leNingizimu Afrika yethu. Ngokubambisana, singenza umehluko omkhulu ezimpilweni zemindeni nezingane ezincane.
Ukwenza ibandla lakho lisebenze ekukhonzeni imindeni kufaka amaqembu amathathu abantu: abaholi beBandla, abahlanganisi nabaholi be-FTD – abaziwa ngokuthi amaChampions. Khetha ukuthi yikuphi okusebenza kangcono kuwe ukuhlola ukuthi yiziphi izinyathelo zakho ezilandelayo.
USikunye ukholelwa ekutheni ukuze ibandla lisebenzele imindeni ngempumelelo, ubuholi budinga ukuqaphela futhi bubandakanyeke. Lokhu kuqinisekisa ukuthi yonke imisebenzi yoSuku Lweminyaka Eyinkulungwane yokuqala iyingxenye yempilo yebandla lonke. Asikholwa ukuthi umholi webandla kumele enze konke, kepha kunalokho abe namathuba nezibopho ezihlukile kuleyo ndima. Hlola uhambo lomholi webandla lapha.
Wonke umuntu unendima angayidlala ekuqiniseni nasekusekeleni imindeni. Noma ngabe ukuphi, ungenza umehluko futhi ube yingxenye yazo zonke izingane eziqala impilo. Hlola ukuthi yini ongayenza lapha.
Uma unentshisekelo yokuthi ibandla lakho lidlala indima yalo ekwesekeni imindeni futhi ufuna ukuhola iqembu labantu ukwenza lokhu, cabanga ngokuba ngumpetha weSikunye. Umpetha usebenza nomholi webandla kanye namavolontiya ukubona umphakathi okhulayo wokunakekelwa kwabazali bezingane ezincane.